ဆိုးလ်ရှားကို အမြဲတမ်းနည်းပြအဖြစ် ယခုတစ်ပတ်အတွင်း ခန့်အပ်ဖွယ်ရှိ - Yangon Media Group
ဆိုးလ်ရှားကို အမြဲတမ်းနည်းပြအဖြစ် ယခုတစ်ပတ်အတွင်း ခန့်အပ်ဖွယ်ရှိ
မန်ယူသည် အသင်းကို ယာယီတာဝန်ယူနေစဉ်အတွင်း ရလဒ်ကောင်းများရရှိအောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့သော နည်းပြ ဆိုးလ်ရှားကို အမြဲတမ်းနည်းပြ အဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းအား ယခုသီ တင်းပတ်အတွင်း လုပ်ဆောင်ဖွယ် ရှိကြောင်း Daily Mail သတင်း စာက ဖော်ပြခဲ့သည်။
ဆိုးလ်ရှားသည် ယမန်နှစ် ဒီဇင်ဘာလက ရာထူးမှထုတ်ပယ် ခံရသော မော်ရင်ဟို၏နေရာတွင် ယာယီနည်းပြအဖြစ် ရာသီကုန် အထိ တာဝန်ပေးခံရခြင်းဖြစ်ပြီး ¤င်းတာဝန်ယူခဲ့သော ၁၉ ပွဲတွင် ၁၄ ပွဲအနိုင်ရအောင်စွမ်းဆောင် ပေးနိုင်ခဲ့ပြီးနောက် အမြဲတမ်း နည်းပြဖြစ်လာရန် ရေပန်းစား နေသည်။
တစ်ချိန်တည်းတွင် မန်ယူ အသင်းနည်းပြအဖွဲ့ဝင် မိုက်ဖီလန် က မိမိအနေဖြင့် အသင်းကိုစ ရောက်စဉ်ကတည်းက သြစတြေး လျကလပ် စင်ထရယ်ကို့စ်မာရီ နာ၏ အားကစားဒါရိုက်တာရာ ထူးနှင့် မန်ယူနည်းပြအဖွဲ့ဝင်ရာ ထူးများကို ပူးတွဲလုပ်ဆောင်ခဲ့ သည်ဖြစ်ရာ အဆိုပါတာဝန်များ ကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွား နိုင်ရန် မျှော်လင့်ကြောင်းပြောခဲ့ သည်။
ပြည်သူနှင့်အစိုးရ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာကဏ္ဍများ ပါဝင်သည့် Digital CitizenDigital CitizenEngagement Application ကို ကျောက်တံတာ?
နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်းတွင် စစ်သား ၁၁ ဦးကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်း အိုင်အက်??
အင်းတကော်တွင် မင်္ဂလာဆောင်မှ ဧည့်ခံသည့် အစားအသောက်များ စားပြီး မသက်သာသည့် ရွာသား ၁၇ ဦး ပဲခူ??